Ugwazwe esangweni lesikole umfundi waseSiyanda | isiZulu
Ugwazwe esangweni lesikole umfundi waseSiyanda
Buka: okwenzeke ngesikhathi kudutshulwa umfundi amahlandla angu-13
Ilimalile ingane eshaywe ngasemshinini yokudlala epaki
Kugwazwe umfundi nge-screwdriver eThekwini
Sweetwaters - Abafundi besikole samaBanga aphakeme iSiyanda High School endaweni yaseSweetwaters basathuka izanya kulandela ukugwazwa komunye wabafundi esangweni lesikole.
UNtokozo Gwala, 16, obefunda iBanga 10 kuthiwa ugwazwe owesilisa phandle kwamasango esikole ngehora lesithathu, kubika iSOLEZWE.
Kuthiwa umsolwa wacasulwa indlela uNtokozo ayembuka kangayo kwase kwaba nokuhilizisana phakathi kwabo wagcina esebalekela esikoleni uNtokozo.
UNtokozo kuthiwa wakhonjwa omunye umngani kamsolwa wathi ‘nangu lo obumfuna’.
Funda:Usagcwele amathafa umfundi osolwa ngokugwaza uthisha eMnambithi
Wazama ukubaleka uNtokozo, kodwa umngani kamsolwa ofunda kusona lesi sikole wamukeqa wawa wabe eseyamgwaza umsolwa. UNtokozo wasizwa omunye umngani wakhe owamubalekisa wamufaka ngaphakathi esikoleni esephelelwa amandla.
Othisha babe sebemuphuthumisa emtholampilo KwaMpumuza kodwa wafika washonela khona esalinde i-ambulance ezomusa esibhedlela.
“Asinaso isiqiniseko sokuthi babebangani kodwa sazi ukuthi babebanga ukuthi uNtokozo umbukile lomfana wabe esemsukela wabaleka wangena esikoleni ekuseni.
Ukuphuma kwesikole lomfana wabuya wazolinda uNtokozo esangweni lesikole ngemuva kwaloko sabona ngoba uNtokozo eselele phansi esevuza igazi,” kusho omunye wabafundi owayekhona ngesikhathi kuphuma isikole.